အထူးကဏ္ဍ Archives | Page4of 31 | Frontier Myanmar
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စအတွက် အများဆုံး အသုံးပြုနေသည့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေတွင် အသရေဖျက်မှုပင်မပယ်နိုင်
ဉာဏ်လှိုင်လင်း ရေးသားသည်။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ တရားစွဲဆိုမှုစုစုပေါင်းရဲ့ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေသာ ဖြစ်နေပေမယ့် အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်တွေကတော့ အသရေဖျက်တယ်လို့ ယူဆရုံနဲ့ ဒီဥပဒေကို သုံးပြီး တရားစွဲခွင့်ရှိတဲ့ အခြေအနေကို အပြောင်းအလဲလုပ်ပေးဖို့ဆန္ဒမရှိကြပါဘူး။ ဒီဥပဒေကို ပြန်ပြင်ဖို့စတင်ကြိုးပမ်းတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့ သြဂုတ် ၂ရက်နေ့ အစည်းအဝေးက အသရေဖျက်မှု.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက် သုံးရပ်
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ- မြေတိုင်ကန်ရွာတွင် သြဂုတ် ၇ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ဓာတ်ပုံ-ဉာဏ်လှိုင်လင်း
Myanmar Now က ကိုဆွေဝင်း အာမခံရရှိ၊ သြဂုတ် ၇ ရက်နေ့တွင် စတင်ရုံးထုတ်မည်
စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးသားတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် လူသိများတဲ့ ကိုဆွေဝင်းဟာ “မဘသအဖွဲ့ကြီး၏ ဦးဆောင် ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သူ ဦးဝီရသူကို အခြေအမြစ်မရှိသည့် စွပ်စွဲချက်များဖြင့် လူမှုကွန်ရက်တွင် ဝေဖန်ရေးသားခဲ့သည်” ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ မတ်လ ပထမပတ်ကတည်းက မန္တလေးမှာ အမှုဖွင့်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ် ထွန်းခိုင် ရေးသားသည်။ UPDATED: 1st August ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ ဇူလိုင်.
News Feed, အထူးကဏ္ဍ, စီးပွားရေး, ဆောင်းပါးကဏ္ဍ